“Dhallinyaradu waxay ku mashquulsan yihiin isboortiga
Hogaamiyaha DFS Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qeyb galaya xafladda xiritaanka Tartanka Kubadda Cagta ee Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Benaadir oo lagu qabtay magaalada Muqdisho 31-kii Diseembar, 2020, maadaama uu seegay ciyaartii Finalka ee u dhaxeysay Galmudug iyo Banaadir.
Wuxuu shaaciyay in shanta koox ee matalaya Dowlad Goboleedyada Hir-Shabeelle, Galmudug, Puntland, Koonfur Galbeed & Jubbaland lagu daray gobolka martida loo yahay ee Banaadir.
Hogaamiye Farmaajo ayaa sheegay in Cayaaraha ay dhalinyarada ka fogeynayaan qabyaaladda, xagjirnimada iyo daroogada, isla markaana ay keeni karaan midnimo, is dhexgal iyo arrimo kale oo muhiim u ah soo kabashada dalka.
“Si ay dowladdu u hirgeliso Qorshaha Horumarinta Isboortiga Qaranka, qeybaha kala duwan ee bulshada waa inay kaalintooda ka qaataan. Waxaan dowladda ka codsanayaa inay xoojiso isku xirnaanta bulshada, oo ay ugu horreyso kubbadda cagta.” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Farmaajo.
Hogaamiyaha Soomaaliya Maxamed C / llaahi Farmaajo ayaa munaasabada ka sheegay in sanadka soo socda tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Benaadir lagu qaban doono garoonka kubada cagta ee Muqdisho Stadium, kaasoo FIFA aqoonsatay sanadka 2020.
Hogaamiyaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Ra’iisul Wasaarihiisa Maxamed Xuseen Rooble ma aysan soo xaadirin ciyaartii xiritaanka Koobka Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, laakiin waxay ka daawadeen Hogaamiye Farmaajo shaashada shaashadda Villa Soomaaliya.
Waa maxay ujeedka safarka Cali Guudlaawe?